Shiinaha Warshadaha Pasteurizer & Sterilizer iyo alaab-qeybiyeyaasha. Higee
Hababka kala duwan ee loo yaqaan 'Pasteurizer or sterilizer like Tunnel type pr plat sterilizer' ayaa loogu talagalay loona habeeyay iyadoo loo eegayo shuruudaha macmiilka ee cabitaannada qaarkood.
Nooca Pasteurizer-Buufin Sterilizer
Qalabku wuxuu qaataa wareega wareega jeermiska biyaha diirran, qaboojinta biyaha diirran kahor, qaboojinta biyaha qabow ee seddex-daweyn ama daaweyn heerar kala duwan ah, nadiifinta iyo waqtiga qaboojinta iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaalaha, xakameynta soo noqnoqoshada, xakamaynta otomaatiga iyo otomaatiga sare.
* Waxay qaadataa saxanka silsiladda silsiladda silsiladda polypropylene (HTPP) ee heerkulka sarreeya waxayna qaadataa qaybaha korantada ee Japan. Fuselage-ku wuxuu ka samaysan yahay bir bir ah.
* Mesh caag ah oo tayo sare leh oo leh saxan silsilad ah, wuxuu ku shaqeyn karaa heerkul sarreeya muddo dheer (-98), heer-kulka sarreeya ee muddada-gaaban 104 ° C;
* Xinjiraha adag ee biiyaha ballaadhan, qulqulka qulqulka waa mid deggan oo xasilloon, iyo heerkulka heerkulku waa joogto;
* Isticmaalka guud ee teknoolojiyada soo kabashada kuleylka badan ee tamarta, keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka;
* Dareeraha heerkulka Pt100, saxnaanta cabbirka sare, illaa ± 0.5 ° C;
* Isku-dhaf-geedi-socod badan, hab macquul ah, ayaa maareyn kara waxyaabo kala duwan;
* Heerkulka madhalaysnimada waxaa gacanta ku haya shaashadda taabashada ee 'PLC'.
* Wadarta iskuxirka waqtiga soo noqnoqoshada xakamaynta, waa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo habka wax soo saarka;
* Waxay ku qalabeysan tahay quudinta iyo soosaarida otomaatigga ah ee loogu talagalay dhalooyinka aan wareegga lahayn, bacaha balaastigga ah, kartoonka saqafka, dhalooyinka quraaradaha ah, daasadaha iyo alaabada kale, iyo u gudubka khadka wax soo saarka otomaatigga ah oo siman;
* Waxaad siisaa dadka isticmaala adeegyada tijaabinta qaybinta kuleylka, isticmaal nidaamyo khibrad leh, kormeerida khadka tooska ah ee isbedelka heerkulka inta lagu jiro howlaha wax soo saarka.
* Iyada oo si otomaatig ah loo xakameeyo heerkulka madhalaysnimada, hagaajinta stepless ee waqtiga jeermiska
* In si ballaaran loogu isticmaalo noocyada kala duwan ee dhalooyinka, cabitaanka cabitaanka aashitada qasacadaysan, cabitaanka elektaroolka, aalkolada, dhir udgoon iyo alaabada kale ee jeermiska looga dhigo iyo qaboojinta;
* Qalabkan waxaa loo qaabeyn karaa iyadoo la raacayo xaaladaha nadiifinta iyo shuruudaha wax soo saarka ee uu soo saaray adeegsadaha.
2.Pasteur plate plate sterilizer
Madhalays ka dhigida Beerku badanaa waxay isticmaashaa 72 ° C, 27PU value (Unugyada nadiifinta) tiknoolajiyadda si ay u disho khamiirka iyo ilaha kale ee wasakhda noolaha ee biirka, si ay u ilaaliso nafaqooyinka biirka iyo waqtiga kaydinta muddada-dheer iyada oo lagu jiro xaaladda heerkulka ugu hooseeya ee jeermiska taranka. Daaweynta 'Pasteurization' ayaa lagu dhammeeyaa 30 ilbiriqsi gudahood, iyadoo la ilaalinayo dhadhanka iyo dhadhanka wanaagsan
Biyo qabyo ah ayaa lagu cadaadiyaa mashiinka nidaamkii hore waxaana loo diraa sterilizer si loogu beddelo preheat. Kadib waxay galeysaa qeybta nadiifinta waxaana lagu kululeeyaa oo lagu nadiifiyaa biyo kulul oo ah 75 darajo Celsius. Wadada toddoba iyo tobnaad waxay galeysaa qaybta haynta ee 72 ° C nadiifinta heerkulka joogtada ah Ka dib isweydaarsiga preheat, waxaa lagu qaboojiyaa 0-2 water biyo baraf ah. Qaybta qaboojinta maaddada waxaa loo dirayaa meel ka hooseysa 4 ℃ haanta nadiifka ah ama mashiinka wax lagu buuxiyo ee wax lagu buuxiyo.
Hore: Nidaamka daweynta biyaha
Xiga: Khadka mashiinka xoqida
Pasteurizer iyo Sterilizer